Project - City Ocean Zigong Art Co., Ltd.
dharka xayawaan qiroweyn
Puppets Hand xayawaan qiroweyn
fuula, xayawaan qiroweyn
Socodka Ride xayawaan qiroweyn
Battery xayawaan qiroweyn Cart
Maro adag Model
Maro adag Dinosaurs
Maro adag Animal
Maro adag Kartuunka naqshad
lafaha xayawaan qiroweyn
Ka hadalka Geedaha
Waa naqshad Ghadafi
Ku soo dhawoow Si Art Ocean
Park xayawaan qiroweyn ee Russia, 2016 Winter
Iyo baraf ma noqon karaan sababta in carruurta ay joojiyaan ka booqanaya park xayawaan qiroweyn theme ah, iyo haddii ay taasi caddayn ugu fiican.
2017 Sanya Haitang Bay Theme xayawaan qiroweyn Park Qaranka
The lix iyo lixdan xiddigaha ugu horeysay xayawaan qiroweyn Shiinaha ee Haitang Bay park xayawaan qiroweyn waa nuxurka cilmi xayawaan qiroweyn ee Shiinaha. Waxaa oo dhan soo bandhigay jidka 1: 1 model weyn asalka ah.
The Lixdan iyo lix nooc oo xayawaan qiroweyn animatronic oo noo by maded ee park ayaa la rakibay. Dinosaurs waxay ka kooban yihiin ee lafaha steel oo dusha gel silica. Bay u noqon karaa jirka oo ay ka dhigi dhawaaqa, iyo jilitaanka waa mid aad u sarreeya.
Park xayawaan qiroweyn ee Russia, 2016 Summer
Qof walba jecel yahay in uu arko dinosaurs ee park theme maxaa yeelay waxa uu keeni doonaa farax dheeraad ah. Gaar ahaan loogu talagalay carruurta, waxay waalan oo ku saabsan dinosaurs animatronic yihiin. Currently, ugu of beeraha theme leeyihiin animatronics kala duwan xoolaha oo lagu daydo, gaar ahaan dinosaurs in caawiyo si loo soo jiito more visitors.And this park xayawaan qiroweyn Ruush waa tusaalaha ugu wanaagsan.
2017 xayawaan qiroweyn Dream Park ee xeebaha geeska Afrika
The park xayawaan qiroweyn fiican u furay in xeebaha geeska Afrika. Waxaa ka park ee xayawaan qiroweyn dhaqanka iyo sida museum sayniska xayawaan qiroweyn a kala duwan. booqde kasta helo waayo-aragnimo muuqaal ah ugu dhamaystiran oo xiiso leh
Cinwaanka: No.93, yejiagou, lianggaoshan wadada, da 'degmada ah, magaalada zigong
Blue Robot Costume, Velociraptor Dinosaur, Dinosaur World Near Me, Kids Amusement Rides For Sale, tareenka xayawaan qiroweyn , Mechanical Dinosaur,